DigniinIsticmaalka AFF_LINK joogto ah oo aan la qeexin - loo maleeyay 'AFF_LINK' (tani waxay ku tuuri doontaa qalad nooca mustaqbalka ee PHP) /media/actualidadgadget.com/website/wp-content/plugins/abn-appstore/definitions.php on line 22
Sidee loo yareeyaa saameynta cudurka coronavirus ee shirkad | War gadget
Sida loo yareeyo saameynta coronavirus ee shirkad
Qolka Ignatius | | Aplicaciones, Tababarada
Fayraska corona wuxuu curyaamiyay ficil ahaan dhammaan Yurub, Shiinaha iyo waddamada kale ee adduunka intiisa kale muddo labo bilood ah. Dhamaan dhaqdhaqaaqii ganacsiga ayaa istaagay xalay. Maaddaama wejiyadaha kaladuwan laga adkaaday inay ku soo noqdaan caadi ahaan, ganacsiyada ayaa dib loo furayaa.
Waxay kuxirantahay nooca ganacsiga, waa inaan raacnaa xayiraad taxane ah sida kala fogaanshaha bulshada, isticmaalka waji-furka, awood xadidan ... waxay noqon karaan musbaaska sanduuqa ganacsato badan iyo kuwa iskaa wax u qabso ah kadib markay laba bilood hawl la'aan ahaayeen
Qaar badan oo ka mid ahi waa ganacsato iyo wershedeyaal madaxbanaan kuwaas oo isku dayaya inay helaan habab ay ku awoodaan ganacsiga fur, Iskuday inaad lumiso lacag yar intii suurtagal ah ama ugu yaraan daboosho kharashyada illaa xaaladdu hagaagto bilaha soo socda. Haddii aad rabto inaad ogaato qaabab kaa caawin kara inaad ka gudubto dhibaatada uu ku dhacay coronavirus, waxaan kugu martiqaadayaa inaad sii wadato akhriska, maxaa yeelay hubaal, waxaad ka heli doontaa dhowr fikradood oo aan maskaxdaada dhaafin.
Waxaad u maleyn kartaa in kani yahay hal maqaal oo ka badan inta aad ka heli karto internetka nuucaani ah, laakiin waxa ugu horeeya ee aad ogaataa waa inaan sidoo kale ahay ganacsade, sidaa darteed, waxaan si fiican u aqaanaa waa maxay dhibaatooyinka haatan na haysta iyo kuwa in aan haysanno waxa aan isku dayno xal raadi sida ugu dhakhsaha badan.
1 Codsiyada maaraynta oo dhameystiran
2 Kala xaajoonaya alaab-qeybiyeyaashayada
3 Ka shaqeyso guriga
3.1 Abaabul shaqo
3.2 Kulamada Virtual
3.3 Xiriir fog
4 Samee dukaan internetka ah
Codsiyada maaraynta oo dhameystiran
Canshuuraha iyo latalinta shaqaaluhu waxay noo ogolaanayaan inaan ku maamulno mushahar bixinta, qaansheegadka, canshuuraha, xisaabinta ... qaab aad u fudud oo aan walwal lahayn. Laakiin, waxay kuxirantahay mugga shirkadeena iyo tirada shaqaalaha, waxay u egtahay in bil kasta, qaansheegta lataliyahayagu waa mid ka mid ah kharashaadka aynaan dabooli karin.
Xaaladdaan ka hor taladeena ayaa ah: ku maaree shirkaddaada daruuraha. Waa hawl sii kordheysa oo fudud oo dhaqaale, tan iyo markii aan gacanta ku hayno tiro badan oo adeegyo ah oo ku urursan hal meel iyo qiime aad uga hooseeya oo lataliye heegan ah uu matali karo.
Kala xaajoonaya alaab-qeybiyeyaashayada
Kuwo badan ayaa ah shirkadaha iyo kuwa madaxbanaan ee isku dayaya inay dib ula soo noqdaan caadi ahaan qaraabo kadib marinka coronavirus. Mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan ee shirkaddu waxay la xiriirtaa lacag-bixinta. Kahor intaadan ka fikirin yareynta kharashaadka, oo mustaqbalka fog waxyeello noo horseedi kara, waa inaan u fariisano wadahadal lala yeesho alaab-qeybiyeyaashayada.
Waxay kuxirantahay xaalada dhaqaale ee coronavirus uga tagay alaab-qeybiyaha, waxay u badan tahay inay aqbali doonaan dib u dhigista ururinta qaansheegyada la sugayo. Maskaxda ku hay in shirkad kasta ama iskaa-u-shaqeysata ay doorbideyso inay lacag soo dalacdo, xitaa haddii ay soo daahdo, inta aan lacag laga qaadin.
Sida iska cad, ka hor inta aan la fariisan si aan isugu dayno kordhinta lacagaha, waa inaan tixgelin siino wareejinta alaab-qeybiyahayagamaaddaama aynaan ahayn macaamiisha kaliya ee codsanaya dib u dhigis.
Ka shaqeyso guriga
Inta badan shaqooyinka xafiiska ee aan lagu qaban dadweynaha hortiisa shaqsi ahaan, si fiican ayaa looga qaban karaa guriga, ilaa iyo inta anshaxa shaqada la aasaasayo in shaqaalaha iyo shaqaaluhuba u hoggaansamaan.
Ka shaqeynta guriga, ma aha oo kaliya in la yareeyo boosaska xafiisyada, taasoo u oggolaanaysa ganacsadaha inuu raadsado xafiisyo yaryar iyo sidaas awgeedna loo dhimo qadarka kirada bishii. Waxay sidoo kale u oggolaaneysaa loo-shaqeeyaha inuu lacag ku keydiyo gunnooyinka ama masaafada haddii loo baahdo.
Codsiyada lagu daboolayo baahiyaha shirkad kasta ee shaqaalaheeda si ay uga shaqeeyaan meel fog, waxaa jira noocyo badan oo codsiyo ah Waxay kuu oggolaanayaan inaad ka shaqeyso meel fog oo aan waxna kaaga dhinnayn.
Codsiga Kooxaha ee Microsoft waxaa loogu talagalay in loogu oggolaado shirkadaha inay ka shaqeeyaan meel fog, ha ahaadaan wuxuu aasaasayaa marin wada xiriir guud iyo mid shaqsi leh mid kasta oo ka mid ah dadka isticmaala.
Kooxaha Microsoft, waxay isku darayaan a madal wicitaanka video taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan qabanno shirar macmal ah anaga oo aan u baahnayn inaan isku tashanno meel xafiiska ka mid ah oo aan ku qaban karno, ha ahaadeen kuwo xilliyaysan ama kuwo gaar ah.
Wuxuu gacan-qabad kula shaqeeyaa To-Do, oo ah barnaamijka hawlgalka ee Microsoft, kaas oo wuxuu noo ogolaanayaa inaan qabanqaabino shaqada sugaya mid kasta oo shaqaalaha ka mid ah lana hubinayo xaaladdiisa. Waxay la midowday Office 365, oo u oggolaanaysa dhowr qof inay ka wada shaqeeyaan isla dokumentiga.
In kastoo Slack waa bedel fiicanMaaddaama aysan bixin wicitaannada fiidiyowga iyo isdhexgalka maamulaha hawsha, kama dhigayso codsi lagu taliyay, maaddaama sida ugu macquulsan ay tahay su'aal ah in la isku geeyo dhammaan howlaha suurtagalka ah ee isla codsigan.
Marka ay timaado sameynta wicitaanada fiidiyowga, tirada xulashooyinka ansax ah ayaa aad u ballaaran. Haddii aan dooranay inaan adeegsanno Kooxaha Microsoft, waxaan ku sameyn karnaa wicitaanno fiidiyoow isla codsi isku mid ah, sidaas looma baahna in la adeegsado adeegyo kale.
Hadeysan arintu sidan aheyn, xulashooyinka ay bixiyaan labada kulan ee Google iyo Zoom waa horumarin ku saabsan tirada adeegyada iyo tirada kaqeybgalayaasha (100 isla fiidiyaha wac). Labada barnaamijba, sida Microsoft Teams, ayaa sidoo kale loo heli karaa aaladaha moobaylka.
Haddii aan isticmaalno a barnaamijka maaraynta ganacsigeenna, waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan weydiino soo-saaraha haddii arjiga uu bixinayo suurtagalnimada helitaanka meelaha fog, si markaa hal kombiyuutar, dhammaan shaqaaluhu u sii wadan karaan shaqadooda sidii ay horayba u ahaayeen.
Haddii tani aysan ahayn kiiska, waxaan ka faa'iideysan karnaa codsiyada maaraynta fog, codsiyada noo oggolow inaan ku xirno meel kasta oo isticmaal kombiyuutarka oo dhan, maahan oo keliya barnaamijka maamulka ee kumbuyuutarka lagu rakibay. TeamViewer waa mid ka mid ah xalka ugu dhameystiran ee laga heli karo suuqa, maaddaama ay sidoo kale na siiso codsiyo loogu talagalay qalabka moobiilka.
Samee dukaan internetka ah
Haddii aad waligaa tixgelisay abuurista dukaan internetka ah waxaa laga yaabaa inay hadda tahay waqtiga ugu habboon. Internetka waxaan ka heli karnaa adeegyo kala duwan oo noo oggolaanaya inaan abuurno degel, maareynno lacag bixinta, hababka dhoofinta ... Iyadoo ku xiran waxa ganacsigeennu yahay, waxay noo oggolaan doontaa inaan ballaarinno dhagaystayaasha suurtagalka ah ee aan gaari karno.
Dareenkan, haddii bogga Facebook ee shirkadeena uu inta badan firfircoon yahay, waxaan ka faa'iideysan karnaa barnaamijka cusub ee Facebook loo yaqaan Dukaamada Facebook, madal in waxay ka caawisaa ganacsiyada yaryar inay ku iibiyaan wax soo saarkooda Facebook taasna waa la bilaabay horaantii markii hore ay qorsheeyeen shirkadda Mark Zuckerberg iyada oo ujeedadu tahay in laga caawiyo ganacsiyada yaryar xilliyadan aan la hubin.
Sida ku cad barnaamijkan, samee dukaan qadka ah oo loo maro Facebook Stores waa hawl aad u dhakhso badan oo fudud Iyada oo loo marayo sheybaarada kala duwan iyo aaladaha ay dhigteen qashinkeena, marka hadaan hayno muuqaal ah dhamaan badeecadeena, waxaan heli karnaa dukaan u gaar ah oo aan ku heli karno daqiiqado yar gudahood.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Aplicaciones » Sida loo yareeyo saameynta coronavirus ee shirkad
Huawei Y6P: Waxaan falanqeyneynaa "qiime jaban" ugu dambeeyay ee ka yimid Huawei
Yeedi 2 Hybrid, oo si qotodheer u falanqeeya mashiinka nadiifinta fayadhawrka casriga ah ee robot-ka ah